नुनमा हुन्छ तपाईलाई करोड पति बनाउने शक्ति, मात्र यो उपाय अपनाउनुहोस् ! - Babal Khabar
September 22, 2021 by बबाल खबर
नुनको प्रयोग खानको लागि गर्दा लाभ हुन्छ त्यसरी नै नुनले हाम्रो जीवन पनि लाभ नै लाभ दिन्छ भन्ने वास्‍तु विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ।
वास्तु विज्ञानका अनुसार नुनमा गजब को शक्ति हुन्छ । जसले तपाई हाम्रो घरमा सकारात्मक उर्जाले भरि दिन्छ साथै घरमा सुख समृद्धि पनि बढाउने काम गर्छ तर यसको लागि नुनलाई खाने मात्र नभई अरु नै तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नु पर्छ।
कसैको दुस्ट नजर लागेछ भने जान्ने ले नुनको प्रयोग गरेर नै झा’रफुक गरेको तपाई हामीले देखेकै छौँ यसले ख’राब शक्ति र दो’षलाई पन्छाउने काम गर्छ।
वास्तु विज्ञानका अनुसार शिशाको कचौरामा नुन भरेर ट्वाइलेट वा बाथरुम मा राख्न सकिन्छ यसले घरको वास्तुदो’ष हटाउन मद्दत गर्छ किनकि नुन र शीशा दुवै राहु को वस्तु हो र यसले राहु को नकारात्मक प्रभाव लाई रोक्ने काम गर्छ।
राहु नकारात्मक उर्जा र कीटा’णुहरुका कारणले पनि सक्रिय हुने भएको ले यसो गर्नाले घरमा सुख समृद्धि र स्वास्‍थ्य सबैमा लाभ हुनसक्छ। शीशाको भाँडामा नु’न भरेर घरको कुनै कुनामा राखी छोड्नाले घरमा सकारात्मक उर्जाको उत्पत्ति र संचार हुन थाल्दछ।
राहु, केतु को दशा चली रहेको छ वा मनमा कुनै नराम्रो बिचार या ड’र पै’दा हुन थाल्यो भने पनि हो नुनलाई यसरी प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै, डल्लो नुनलाई रातो कपडामा बेरेर घरको मुख्य प्रवेस द्वारमा झुन्ड्याई दिएमा घरमा कुनै खराब तत्वले प्रवेश गर्न सक्दैन।
यदि व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति गर्न वा व्यापारीक प्रतिष्ठान बढाउनु छ भने कार्यालयको ढोकामा र तिजोरीको माथि पनि यसरि नुन राख्न सकिन्छ यसले धन आर्जनमा सहयोग गर्छ। साभार गरियको खबर
Prev‘सक्किगोनी ’मा फर्किए ‘पाँडे’ ! अहिले सम्म कहाँ थिय जान्नुस
nextनेपाली तरीकाले विवाह गर्न नेदरल्याण्ड र फिलिपिन्सदेखि पोखरामा अाइपुगे यि जोडी !